Wararka - Sidee Loogu Xulaa Dharka Dibadda Ugu Fiican?
Dharka Ragga iyo Haweenka
Parka iyo Jaakada
Sidee loo doortaa Dharka Dibedda ee ugu Fiican?
Bixida xilliga qaboobaha, deegaanno kala duwan, waqtiyo kala duwan, waddooyin kala duwan, da 'kala duwan, xulashooyinka dharka dibadda ayaa ka duwan. Marka sidee ku dooran kartaa?
1. U bareer saddexdaas mabda '
Gudaha illaa dibedda, waa: lakabka dhididka-lakabka kuleylka-lakabka dabaysha. Guud ahaan marka la hadlayo, lakabka dhidid-dhididku waa shaar hoose ama funaanad dhakhso-qalajisa, lakabka diirimaadku waa dhogor, iyo lakabka aan dabayshu haysan waa jaakad ama jaakad hoosaysa. Isku-darka macquulka ah ee saddexda lakab ayaa qancin kara inta badan howlaha dalxiiska dibadda. Sanadihii la soo dhaafay, qaar ka mid ah jaakadaha jilicsan ee cusub ayaa soo muuqday. Tani sidoo kale waa xulasho wanaagsan, waxayna sidoo kale leedahay astaamaha diirimaadka iyo dabaysha. Mid kale ayaad xidhan kartaa.
2. Dooro dharkaaga sida ay tahay waqtiga iyo wadada
Mabda'a dharka saddexda lakab waa mabda'a aasaasiga ah ee dharka isboortiga banaanka. Intaa waxaa dheer, dharka waa in lagu daraa waqtiga iyadoo loo eegayo xaaladda dhabta ah. Haddii aad socon doontid muddo dheer, soo qaado jaakad hoose. Markaad socotid doonta, ma dareemi kartid qabow badan dhidid, jimicsi jireed iyo kuleylka jirka awgood. Wakhtigan, ha xidhin jaakadaha ilaa aad ka nasanayso wadada ama aad kaamam dhigayso si aad heerkulka u ilaaliso.
3. Xullo dhar ku habboon da 'kala duwan
Dadka da 'ahaan kala duwan waxay u labbistaan ​​waxoogaa ka duwan markay baxayaan. Marka waayeelka ay ku sameynayaan isboorti banaanka, waa inay xirtaan lakabyo badan intii suurtogal ah si ay u kululaadaan. Dharka lakabyada badan waxay ka awood badan yihiin ilaalinta kuleylka marka loo eego dharka lakabyada keliya. Intaa waxaa dheer, waxay iska bixin karaan dhowr lakab oo dhar ah markay dareemaan kuleyl inta lagu jiro jimicsiga. Haddii aadan rabin inaad xirato dhar badan, waxaad dooran kartaa dhogor oo lagu daray jaakad isboorti oo laba-jajab ah ama jaakad dabacsan oo aan dabeyl lahayn. Isku day inaadan xiraneyn funaanadaha iyo jaakadaha hoos u dhaca inta lagu jiro cayaaraha banaanka, maxaa yeelay dhididku ma sahlana in lagu qallajiyo biyaha waana kuwo culus. Jaakadaha hoose waa diiran yihiin laakiin ma neefsan karaan.
Carruurtu uma baahna inay xirtaan nigis kulul oo qaro leh oo ku yaal lakabka gudaha. Dharka caadiga ah ee cudbiga ah ayaa ku filan. Lakabka diirran ayaa lagu gashan karaa jaakad kaashmiir ah + jaakadda kaashmarka ama jaakad yar oo duuban.
Waqtiga boostada: Sep-07-2020
Waa Maxay Nooca Bannaanka Ugu Caansan Oo Lagu ...
Covid-19 wuxuu keenay saameyn weyn iyo Tes ...
No.173 ， Shuiyuan Str. ， Shijiazhuang ， Shiinaha